We.com.mm - အသက်(၅၀)ကျော် ဦးဦးရဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုရခြင်း လျှို့ဝှက်ချက်
ကိုကြီး Chuando Tan ကတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ပါ။ အခြားသူတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်သလို သူ့ကိုယ်သူလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူတွေ အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲ။ Chuando ဟာ ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ မွေးခဲ့တာဆိုတော့ အခု အသက် ၅၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ပုံစံက အသက် (၂၀) ကျော် (၃၀)လောက်ပဲ ထင်ရပါတယ်။ ဒီလို နုပျိုနေရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က ဘာများလဲ?
Tan ဟာ ၁၉၈၀ ခုနှစ် (သူအသက် ၁၃ နှစ်) လောက်ကတည်းက မော်ဒယ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့အဆိုတော်ဘဝက ကြာရှည်မခံလိုက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခြား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဓာတ်ပုံဆရာအလုပ်ပါပဲ။ Tan ဟာ သူရိုက်တဲ့ အခြားပုံကိုမတင်ဘဲ သူ့ပုံပဲ သူတင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာစတာပဲ။
မီဒီယာတွေ တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ဖြစ်တာကြောင့် ဓာတ်ပုံဆရာရဲ့အရည်အချင်းကို သိချင်ရင် သူတင်တဲ့ပုံကို ဝင်လေ့လာတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် Tan လည်း သူ့ပုံတွေတင်ဖို့IG အကောင့်ကို သုံးခဲ့ပါတယ်။ တင်ရင်းတင်ရင်းနဲ့Tan ရဲ့ပုံတွေဟာ အသက်အရွယ်မပြောင်းလဲတာကို Follower တွေက သတိထားမိလာပါတယ်။ တချို့ကလည်း ဒါဟာ မျိုးရိုးလိုက်တာလို့ထင်ကြေးပေးကြပါတယ်။ တချို့ကလည်း စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ လေသန့်လို့၊ ဆေးဝါးတွေကောင်းလို့၊ ကုန်ပစ္စည်းကောင်းတွေရှိလို့ဆိုပြီး ထင်ကြပါတယ်။ တကယ့်အစစ်အမှန်က ဘာလို့များလဲ?
Tan ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် အခုလို ကျစ်လစ်သန်မာနေတာဟာ ၇၀%က အစားအစာကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၃၀%က လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့်ပါ။ သူဟာ မနက်တိုင်း ကြက်ဥပြုတ်ရဲ့ အကာ(၆)ခုနဲ့ အနှစ်(၂)ခု စားလေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးလျှင် နွားနို့သောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ထောပတ်သီးနဲ့ဘယ်ရီးသီးတွေစားပါတယ်။
နေ့လည်စာကတော့ ကြက်သားနဲ့ထမင်း၊ အရွက်ကင်နဲ့ ငါးပြုတ်ရည်သောက်လေ့ရှိပါတယ်။ သူဟာ ရေခဲမုန့် အရမ်းကြိုက်ပေမယ့် တစ်ခါတလေမှပဲ စားပါတယ်။ ကော်ဖီနဲ့လဖ္ဘက်ရည်လည်း မသောက်ပါဘူး။ ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်သေစာလည်း မသောက်ပါဘူး။ ညစာကို လတ်ဆတ်တဲ့ အစိမ်းရောင် အသီးအနှံတွေပဲ စားပါတယ်။
တစ်ရက်ကို မိနစ် (၉၀) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်
Tan ဟာ တစ်ပတ်မှာ လေးကြိမ် ကြွက်သား အားကစားလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူအရမ်း မအားလပ်တဲ့အခါမျိုးမှာတောင် သုံးကြိမ်တော့လုပ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်း အများဆုံး မိနစ် (၃၀)ပဲ လုပ်ပါတယ်။ Cardio ကစားတယ်၊ ပြေးစက်ပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်တယ်။ ဒါ့အပြင် သူဟာ နေ့တိုင်း ရေကူးပါတယ်။ ညနေပိုင်းမှာ ရေကူးသင်တန်းတတ်ပြီး ၁ နာရီလောက် ရေကူးလေ့ရှိပါတယ်။
ပေါ့တီးပေါ့ပျက်နိုင်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ လူတွေဟာ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာကို လုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာ နုငယ်ပျိုမြစ်ခြင်းအတွက် သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်တာပဲလေ။ ဘာလို့ဆို သင်လုပ်လိုက်သမျှဟာ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုသာမက ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါ သက်ရောက်မှုရှိလို့ပါ။
“ကျွန်တော်အလုပ်တွေအမျိုးအမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်အလုပ်ချင်ဆုံးအလုပ်တွေ့မှ ရပ်တန့်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် လူတွေကိုချစ်တယ်၊ လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုရတာကို သဘောကျတယ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ရတာကြိုက်တယ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာကို ချစ်တယ်။ တကယ်လို့ သင်မလုပ်ချင်တဲ့အရာကို လုပ်နေမယ်ဆိုရင် စိတ်ခံစားချက်လည်း ကောင်းမှာမဟုတ်သလို ကျန်းမာရေးကိုလည်း ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။” လို့Tan က ဖြေထားပါတယ်။
Skin Care Products တွေ မသုံးဘူး
တချို့လူတွေက Tan ကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အကောင်းစား အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ သုံးလိမ့်မယ်လို့ယုံမှတ်ထားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း Tan ဖြေခဲ့တာကတော့ “ကျွန်တော့အသားအရေက Sensitive Skin ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် နေ့စဉ် အလှကုန် ၂ မျိုးပဲ သုံးပါတယ်။ ဂျယ်လ်မျက်နှာသစ်ဆေးရယ်၊ အစိုဓာတ်ဖြည့်ခရင်မ်ရယ်” ပဲ သုံးပါတယ်။
သူ့ကို ဘိုတောက်စ်ထိုးဖို့စပွန်ဆာပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ သူထိုးကြည့်ပေမယ့် သဘောမကျပါဘူး။ အဲဒီကနေစပြီး အလှအပရေးရာဆရာဝန်တွေဆီ မသွားတော့ပါဘူးတဲ့။ Tan တစ်ခုတော့ဝန်ခံထားပါတယ်။ သူ့ဆံပင်တွေ ဖြူလာပြီဆိုတော့ ဆံပင်ဆိုးဆေးတော့ ဆိုးပါတယ်တဲ့။
Tan ဟာ ၁၁ နာရီနောက်ဆုံးထားပြီး အိပ်ယာဝင်ပြီးတော့ မနက်စောစောထပါတယ်။ ညနက်မှ အလုပ်လုပ်တာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေက ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းဘူးလို့Tan က သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဖို့အတွက် မအိပ်ခင် ၅နာရီ(သို့)၆နာရီခြားပြီး ညစာစားပါတယ်။ “ကျွန်တော်ပြောတာယုံပါ။ အိပ်ရာစောစောဝင်တာက တန်ပါတယ်။ အိပ်ရေးလည်းဝတယ်။ ညဖက်ထက် နေ့ဖက်မှာ အလုပ်ပိုပြီးတယ်” လို့Tan ကဆိုပါတယ်။
သူပြောတော့လည်း ဘာမှထူးဆန်းတာ မပါသလိုပဲ။ ကိုယ်ကြိုက်တာလုပ်၊ ကျန်းမာအောင်စား၊ အိပ်ရေးဝဝအိပ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၊ ဒါပဲ။ Jared Leto, Chris Evans, Margot Robbie စတဲ့ ထိပ်တန်း ဆယ်လီတွေဟာလည်း ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်း ကျင့်သုံးကြလို့ ချောမောခန့်ညားနေကြတာပေါ့။ ဒီနည်းအတိုင်းသာ ကျင့်ကြံနေထိုင်မယ်ဆိုရင် ခွဲစိတ်စရာမလို၊ ဘိုတောက်စ်ထိုးစရာမလိုဘဲ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ နုပျိုကျန်းမာနေမယ်ဆိုတာ သူတို့တွေက သက်သေပါပဲ။
အော် ကွီးရဲ့IG အကောင့်လား? >>>>> chuando_chuandoandfrey
22 days ago by Katie Scarlett